N'ogbe HCV Otito ule Kaseti / warara / kit (WB / S / P) emepụta na suppliers | HEO
Otu nzọ ụkwụ HCV ule (Dum Bl ...
HCV Rapid Test Kaseti / Str ...
COVID-19 IgG / IgM Nnwale Nnwale ...
COVID-19 Antigen Ọsọ Ndụ ...
[Ebumnuche eji ya]
The HCV Rapid Test Cassette / Strip bụ mpụta agba chromatographic immunoassay maka qualitative nchọpụta nke nje na Hepatitis C Virus na Dum Blood / ọbara / Plasma. Ọ na-enye aka na nchoputa nke ịrịa ọrịa ịba ọcha n'anya C Virus.
Patba ọcha n'anya C virus (HCV) bụ otu tọrọ atọ RNA virus nke ezinụlọ Flaviviridae na ọ bụ ihe na-akpata ịba ọcha n'anya C. Ọrịa ịba ọcha n'anya C bụ ọrịa na-adịghị ala ala na-emetụta ihe dị ka nde mmadụ 130-170 n'ụwa niile. Dị ka WHO si kwuo, kwa afọ, ihe karịrị mmadụ 350,000 na-anwụ site na ọrịa imeju metụtara ịba ọcha n'anya nke C na nde mmadụ 3-4 na-ebute HCV. Ihe dị ka 3% nke ndị bi n'ụwa na-eme atụmatụ ibute ọrịa HCV. Ihe karịrị 80% nke ndị nwere ọrịa HCV na-ebute ọrịa imeju na-adịghị ala ala, 20-30% na-ebute ọrịa cirrhosis mgbe 20-30 yr gasịrị, yana 1-4% nwụrụ site na cirrhosis ma ọ bụ ọrịa imeju. Ndị mmadụ bu ọrịa HCV na-ewepụta nje na nje na nje ndị a na-egosi ọbara ugbu a ma ọ bụ ọrịa gara aga na HCV.
[Mejupụtara] (25sets / 40sets / 50sets / ahaziri nkọwapụta niile niile ihu ọma)
Cassette / warara ule nwere mpempe akwụkwọ akpụkpọ ahụ nke ejiri antigen HCV jikọtara na akara ule, oke bekee na akara njikwa, yana akwa mpe akwa nke nwere colloidal gold yana recombine HCV antigen. E bipụtara ọtụtụ ule na labeling.
Akụrụngwa E nyere
Nwalee cassette / warara
Akụrụngwa Achọrọ Ma Enyeghị Ya
Mkpụrụ osisi nnakọta
Usoro usoro anaghị ewepu nje ahụ na sel ọdịbendị ma ọ bụ jiri microscope elele ya anya. Cloning ndị malitere ịrịa mkpụrụ ndụ ihe nketa emeela ka o kwe omume ịzụlite usoro serologic nke na-eji antigens recombinant eme ihe. E jiri ya tụnyere ọgbọ mbụ HCV EIA site na iji antigen recombinant, ọtụtụ antigens na-eji protein recombinant na / ma ọ bụ peptides sịntetik agbakwunyela na nyocha nke serologic iji zere mmeghachi omume na-enweghị isi na iji nwekwuo uche nke ule HCV. The HCV Rapid Test Cassette / Strip na-achọpụta ihe ndị na-alụso ọrịa HCV ọgụ na Ọbara / Ọbara / Plasma. Nnwale ahụ na-ejikọ protein dị na ya ma na-edozi ahụ HCV iji chọpụta ihe na-alụso ọrịa ọgụ na HCV. Mkpụrụ ndụ HCV recombinant eji mee ihe na nnwale ahụ bụ mkpụrụ ndụ ihe nketa maka usoro ihe nrụpụta (nucleocapsid) na ndị na-enweghị usoro.
The HCV Rapid Test Cassette / Strip bụ immunoassay dabere na ụkpụrụ nke usoro antigen-sandwich abụọ. N'oge ule, ihe omuma nile nke ọbara / ọbara / Plasma na-akwaga elu site na ogwu. Ihe na-alụso ọrịa ọgụ na HCV ma ọ bụrụ na ọ dị na mpempe akwụkwọ ahụ ga-ejikọ ndị njikọ HCV. A na - ejidezi usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ na membrane ahụ site na HCG antigens recombinant mbụ, na akara ngosi a na - ahụ anya ga - egosi na mpaghara akara ule na - egosi nsonaazụ dị mma. Ọ bụrụ na mgbochi nje na HCV anọghị ma ọ bụ dị n'okpuru ọkwa achọpụtara, akara agba agaghị etolite na mpaghara akara ule na-egosi nsonaazụ na-adịghị mma.
Iji rụọ ọrụ dị ka njikwa usoro, akara agba ga-apụta mgbe niile na mpaghara akara njikwa, na-egosi na agbakwunyela ezigbo ụdị nke ihe atụ na ịwepụ akpụkpọ ahụ emeela.
(Ihe osise a bụ maka ntụnyere naanị, biko rụtụ aka n'ihe akụrụngwa.) [Maka Kaseti]
Wepu cassette ule na obere akpa akara.
Maka ọbara ma ọ bụ plasma: Jide dropper ahụ n'ụzọ kwụ ọtọ ma nyefee tụlee 3 nke ọbara ma ọ bụ plasma (ihe dị ka 100μl) na mpempe akwụkwọ nke ọma (S) nke ngwaọrụ nnwale, wee malite ngụ oge. Lee ihe osise n'okpuru.
Maka ụdị ọbara dum: Jide dropper ahụ n'ụzọ kwụ ọtọ ma nyefee 1 nkedo nke ọbara dum (ihe dịka 35μl) na mpempe akwụkwọ nke ọma (S) nke ngwaọrụ nyocha, wee tinye 2 tụlee nke nchekwa (ihe dị ka 70μl) wee bido oge ahụ. Lee ihe osise n'okpuru.
Chere maka akara agba (s) egosi. Gwa nsonaazụ ule ahụ na nkeji iri na ise. Agụla nsonaazụ mgbe nkeji iri abụọ.
[NDỌ AKA NA NT PRP ]TA]
Maka inyocha vitro naanị.
Maka ndị ọkachamara ahụike na ndị ọkachamara na saịtị nlekọta.
Ejila mgbe ụbọchị njedebe.
Biko gụọ ozi niile dị n’akwụkwọ a tupu ị mee ule ahụ.
Cassette / warara ule kwesịrị ịnọgide na obere akpa akara ruo mgbe eji.
Ekwesịrị ịtụle ụdị niile dị ka ihe egwu ma mekwaa otu ụzọ ahụ dị ka onye na-efe efe.
A ga-atụfu cassette / warara ule ahụ dị ka iwu gọọmentị etiti, steeti na mpaghara siri dị.
A gụnyere njikwa usoro na ule ahụ. A na-ahụta akara agba na-egosi na mpaghara njikwa (C) dị ka njikwa usoro n'ime. Ọ na - akwado mpịakọta ederede zuru ezu, ịmị akpụkpọ ahụ zuru oke yana usoro nhazi usoro.
E nyeghị ụkpụrụ njikwa na ngwa a. Otú ọ dị, a na-atụ aro ka a nwaa njikwa dị mma na nke na-adịghị mma dị ka ezigbo ụlọ nyocha iji kwado usoro nnwale ahụ na inyocha arụmọrụ ule kwesịrị ekwesị.
[NT ]R ]TA]
The HCV Rapid Test Cassette / warara bụ nanị iji nye a qualitative nchọpụta. Ike nke akara ule adịghị adaba na ntinye nke antibody n'ime ọbara.
Nsonaazụ ndị enwetara site na nnwale a bu n'uche ịbụ enyemaka na naanị nchoputa. Dọkịta ọ bụla ga-atụgharị nsonaazụ ya yana akụkọ ihe mere eme nke onye ọrịa, nchọpụta anụ ahụ, na usoro nyocha ndị ọzọ.
Nsonaazụ nyocha adịghị mma na-egosi na nje ndị na-alụso ọrịa HCV ọgụ adịghị ma ọ bụ na ọkwa adịghị nwale ya site n'ule ahụ.
Nkwekọrịta na Commercial HCV Computara Nnwale
Ejiri HCV Rapid Test mee ihe atụ n'akụkụ n'akụkụ yana iji ule HCV nwere ọsọ ọsọ. Achọpụtara ihe nlebara anya 1035 sitere na ụlọ ọgwụ atọ na HCV Rapid Test na ngwa ahịa. Ejiri RIBA nyochaa ihe nlere ahụ iji gosipụta nnwale nke HCV na ụdị ahụ. A na-akọwapụta nsonaazụ ndị a site n'ọmụmụ ihe ọmụmụ ndị a:
Commercial HCV Rapid Test Na ngụkọta
Positive Na-adịghị mma
HEO Nyocha® Positive 314 0 314
Na-adịghị mma 0 721 721
Na ngụkọta 314 721 1035
Nkwekọrịta dị n'etiti ngwaọrụ abụọ a bụ 100% maka ezigbo ihe atụ, yana 100% maka ụdị adịghị mma. Nnyocha a gosipụtara na ule HCV ọsọ ọsọ dị ka ngwaọrụ azụmaahịa.
Nkwekọrịta na RIBA
Ejiri HCV Rapid Test na HCV RIBA mee ihe nlele 300. A na-akọwapụta nsonaazụ ndị a site n'ọmụmụ ihe ọmụmụ ndị a:
RIBA Na ngụkọta
Na ngụkọta 100 200 300
Nke gara aga: COVID-19 IgG / IgM Otutu Ule Cassette (Colloidal gold)
Osote: Otu nzọ ụkwụ HCV Ule (Ọbara dum / ọbara / Plasma)
mgbochi hcv antibody ule
mgbochi hcv ọbara ule
mgbochi hcv ule
hbs hcv nka
hbsag mgbochi hcv
hcv antibody nke oma
hcv nyocha ọbara
hcv genotype ule
hcv adịghị mma
hcv na-abụghị reactive
Ngwaọrụ ule HCV ngwa ngwa
hcv rna ule
Dengue IgGIgM + Ns1 Combo Test Device (Dum Bloo ...
Dengue IgGIgM Ngwaọrụ Ule (Ọbara dumSerumPlasma)
Ngwa Nnwale Dengue Ns1 (Ọbara dumSerumPlasma)